ကမ်ဘာပျေါမှ အရူးနှမျးဆုံးအလုပျမြား။ – SoShwe
So Shwe February 17, 2022	Funny Leaveacomment
၁။ ဒီပီဇာကို ဒီလိုမြိုးထညျ့ပေးလိုကျတဲ့ ဆိုငျရဲ့လုပျရပျကတော့ တကယျကို လေးစားစရာပါပဲ။ စားသုံးသူတှအေတှကျ အပိုလကျဆောငျပေးတဲ့သဘောလို့ပွောရမှာပါ။
၂။ အဆိုပါအမြိုးသမီးရဲ့မကျြနှာကို ဖုံးကှယျပေးထားတဲ့ အယျဒီတာရဲ့လုပျရပျကတော့ လေးစားစရာပါ။ ဒါပမေယျ့ အလုပျတဈခုကို အပွီးမသတျခငျ အစအဆုံးပွနျစဈဆေးဖို့တော့ လိုအပျပါတယျ။
၃။ ပွီးခဲ့တဲ့ (၂၀၀၀) ပွညျ့နှဈက ဝယျယူခဲ့တဲ့ အင်ျကြီကိုပွနျရောငျးဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့သူတဈဦးပါ။ ပွနျရောငျးတဲ့သူရော၊ ဒီအင်ျကြီကို ဝယျဝတျတဲ့သူပါ တကယျကို လေးစားရမှာပါ။
၄။ ပွိုငျပှဲတဈပှဲကို ကွညျ့ရှုအားပေးဖို့အတှကျ မွငျကှငျးကောငျးတဲ့ထိုငျခုံကိုပဲ လိုခငျြကွတာသဘာဝပါ။ ဒါပမေယျ့ ဒီထျိုငျခုံအတှကျ လကျမှတျရောငျးပေးခဲ့တဲ့ ဝနျထမျးကတော့ တကယျကို လေးစားစရာကောငျးပါတယျ။
၅။ Kansas City ရဲ့ ခရီးသှားလုပျငနျးက Copy Editor တဈယောကျရဲ့ လကျရာပါတဲ့။ ရောကျလာတဲ့ နိုငျငံခွားသားဧညျ့သညျတှအေတှကျတော့ ထိတျလနျ့စရာ အမှားအယှငျးလို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။
၆။ South Dakota ဒသေရဲ့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးကို ဦးဆောငျသူတဈဦးက ကူးစကျရောဂါနဲ့ ပတျသကျပွီး ပွညျသူလူထုကို စိတျခစြဖေို့ ရညျရှယျရေးသားခဲ့တဲ့စာသားပါ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ရဲ့အရေးအသားက တဈခုခုတော့ လှဲခြျောခဲ့တဲ့ပုံပါပဲ။
၇။ ဒီဆောငျးပါးကို သတငျးစာထဲထညျ့ဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တဲ့ တာဝနျခံအယျဒီတာရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကတော့ အံ့သွစရာပါပဲ။
၈။ သသေခြောခြာမှာထားတာတောငျမှ သသေခြောခြာ လုပျဖွဈအောငျလုပျခဲ့တဲ့ စာပို့သမားရဲ့ လုပျရပျကတော့ လေးစားဖို့ကောငျးပါတယျ။
၉။ လကျရာသသေပျလှပတဲ့ ဒီဇိုငျနာတဈယောကျရဲ့လကျရာပါပဲ။ ကမ်ဘာကြျောဒီဇိုငျနာတဈယောကျဖွဈဖို့ အခှငျ့အရေးတျောတျောမြားမြားတယျလို့ပဲ ခပျရှဲ့ရှဲ့ပွောရမလိုပါ။
😝😁 #PooBear #Sewing #YouHadOneJob
A post shared by What's Your Dad Like? (@whaturdadlike) on May 26, 2019 at 2:16pm PDT
၁၀။ စာလုံးပေါငျးသတျပုံက အရေးကွီးတယျဆိုတာကို သကျသပွေနတေဲ့ပုံပါ။ ယာဉျမောငျးတှအေတှကျတော့ ဒှိဟဖွဈစရာနရောတဈခုပါပဲ။
၁၁။ ဘယျနဲ့ညာမသဲကှဲတဲ့သူတှကေို ကားလမျးပျေါတဈယောကျတညျးမလှတျလိုကျဖို့ သငျခနျးစာပါပဲ။
၁၂။ အံ့အားသငျ့စရာစြေးနှုနျးနဲ့ အံ့အားသငျ့စရာပစ်စညျးတဈခုလို့ဆိုရမှာပါ။
Saw this the other day while shopping. Tag placement is everything! #funny #butt #butter #fail #humor #youhadonejob #wtf
A post shared by Bash Crowley (@bashcrowley) on May 28, 2019 at 5:59am PDT
၁၃။ ငယျငယျကသင်ျခြာဘာသာရပျကို မကညြေကျခဲ့တဲ့ Copy Editor တဈဦးရဲ့လကျရာပါပဲ။
၁၄။ ကုနျပစ်စညျးတဈခုအတှကျ လိုကျဖကျတဲ့ထုပျပိုးမှုက ဘယျလောကျအရေးပါလဲဆိုတာကို ဒီပုံက သကျသပွေနပေါတယျ။
I don’t remember this part in Game of Thrones😆😂🤣#funko #pocketpopkeychain #gameofthrones #ghostbusters #funkofail #youhadonejob #slimer
A post shared by John (@johnnyfunko575) on Apr 19, 2019 at 10:55am PDT
၁၅။ Billboard တဈခုတညျးပျေါမှာ ဒီကွျောငွာနှဈခုကို ဟိုဘကျ၊ ဒီဘကျယှဉျပွီး နရောပေးခဲ့တဲ့ တာဝနျရှိသူရဲ့ လုပျရပျကတော့ ငိုအားထကျရယျအားသနျလို့ပဲဆိုရမှာပါ။
၁၆။ ကိုယျ့အားကိုယျကိုးစခေငျြတဲ့ ဘာဂါဆိုငျရဲ့ စတေနာကို မွငျနိုငျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
၁၇။ ဒီပုံအတှကျကတော့ ဒီဇိုငျနာကိုပဲ အပွဈပုံခရြမလိုဖွဈနပေါပွီ။
၁၈။ ဖျောကောငျလုပျတယျဆိုတာ ပွငျပလောကမှာတငျ မဟုတျပါဘူး။ ဒီလိုစြေးရောငျးတဲ့နရောတှမှောလညျး ရှိပါတယျ။
၁၉။ ဘစျေ့ဘောကှငျးအတှကျ ရညျရှယျပွီး မဉျြးဆှဲထားတဲ့ပုံစံပါ။ ဒါပမေယျ့ ဒီမဉျြးက ကစားသမားတှအေတှကျ တျောတျောလေးအခကျတှစေ့မှော အသအေခြာပါပဲ။
This was our field yesterday…😳🤦🏻‍♂️ #youhadonejob #awaygame
A post shared by Tony (@tsanz2) on May 19, 2019 at 4:49am PDT
၂၀။ Wikipedia ကို လူတိုငျးဝငျပွငျဆငျခှငျ့ရှိတဲ့ကိစ်စက သိပျတော့မမိုကျပါဘူး။ အခုဒီပုံအရ တဈယောကျယောကျဝငျပွီး လကျဆော့သှားတဲ့ပုံပါပဲ။
၂၁။ ဖယောငျးရုပျတုပွတိုကျမှာထားဖို့ ဆရာသမားတဈယောကျရဲ့ Bruce Wills နဲ့ပုံတူရုပျထုပါ။ Vin Diesel ရဲ့ ရုပျထုနရောမှာ Bruce ကို လာထားထားတဲ့ပုံပါပဲ။
၁။ ဒီပီဇာကို ဒီလိုမျိုးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ဆိုင်ရဲ့လုပ်ရပ်ကတော့ တကယ်ကို လေးစားစရာပါပဲ။ စားသုံးသူတွေအတွက် အပိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့သဘောလို့ပြောရမှာပါ။
၂။ အဆိုပါအမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာကို ဖုံးကွယ်ပေးထားတဲ့ အယ်ဒီတာရဲ့လုပ်ရပ်ကတော့ လေးစားစရာပါ။ ဒါပေမယ့် အလုပ်တစ်ခုကို အပြီးမသတ်ခင် အစအဆုံးပြန်စစ်ဆေးဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။
၃။ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၀၀) ပြည့်နှစ်က ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ အင်္ကျီကိုပြန်ရောင်းဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့သူတစ်ဦးပါ။ ပြန်ရောင်းတဲ့သူရော၊ ဒီအင်္ကျီကို ဝယ်ဝတ်တဲ့သူပါ တကယ်ကို လေးစားရမှာပါ။
၄။ ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲကို ကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက် မြင်ကွင်းကောင်းတဲ့ထိုင်ခုံကိုပဲ လိုချင်ကြတာသဘာဝပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီထိုင်ခုံအတွက် လက်မှတ်ရောင်းပေးခဲ့တဲ့ ဝန်ထမ်းကတော့ တကယ်ကို လေးစားစရာကောင်းပါတယ်။
၅။ Kansas City ရဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းက Copy Editor တစ်ယောက်ရဲ့ လက်ရာပါတဲ့။ ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေအတွက်တော့ ထိတ်လန့်စရာ အမှားအယွင်းလို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။
၆။ South Dakota ဒေသရဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကို ဦးဆောင်သူတစ်ဦးက ကူးစက်ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူလူထုကို စိတ်ချစေဖို့ ရည်ရွယ်ရေးသားခဲ့တဲ့စာသားပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့အရေးအသားက တစ်ခုခုတော့ လွဲချော်ခဲ့တဲ့ပုံပါပဲ။
၇။ ဒီဆောင်းပါးကို သတင်းစာထဲထည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ အံ့သြစရာပါပဲ။
၈။ သေသေချာချာမှာထားတာတောင်မှ သေသေချာချာ လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ စာပို့သမားရဲ့ လုပ်ရပ်ကတော့ လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်။
၉။ လက်ရာသေသပ်လှပတဲ့ ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ရဲ့လက်ရာပါပဲ။ ကမ္ဘာကျော်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးတော်တော်များများတယ်လို့ပဲ ခပ်ရွဲ့ရွဲ့ပြောရမလိုပါ။
၁၀။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံက အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြနေတဲ့ပုံပါ။ ယာဉ်မောင်းတွေအတွက်တော့ ဒွိဟဖြစ်စရာနေရာတစ်ခုပါပဲ။
၁၁။ ဘယ်နဲ့ညာမသဲကွဲတဲ့သူတွေကို ကားလမ်းပေါ်တစ်ယောက်တည်းမလွှတ်လိုက်ဖို့ သင်ခန်းစာပါပဲ။
၁၂။ အံ့အားသင့်စရာဈေးနှုန်းနဲ့ အံ့အားသင့်စရာပစ္စည်းတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။
၁၃။ ငယ်ငယ်ကသင်္ချာဘာသာရပ်ကို မကျေညက်ခဲ့တဲ့ Copy Editor တစ်ဦးရဲ့လက်ရာပါပဲ။
၁၄။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် လိုက်ဖက်တဲ့ထုပ်ပိုးမှုက ဘယ်လောက်အရေးပါလဲဆိုတာကို ဒီပုံက သက်သေပြနေပါတယ်။
၁၅။ Billboard တစ်ခုတည်းပေါ်မှာ ဒီကြော်ငြာနှစ်ခုကို ဟိုဘက်၊ ဒီဘက်ယှဉ်ပြီး နေရာပေးခဲ့တဲ့ တာဝန်ရှိသူရဲ့ လုပ်ရပ်ကတော့ ငိုအားထက်ရယ်အားသန်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။
၁၆။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးစေချင်တဲ့ ဘာဂါဆိုင်ရဲ့ စေတနာကို မြင်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၁၇။ ဒီပုံအတွက်ကတော့ ဒီဇိုင်နာကိုပဲ အပြစ်ပုံချရမလိုဖြစ်နေပါပြီ။
၁၈။ ဖော်ကောင်လုပ်တယ်ဆိုတာ ပြင်ပလောကမှာတင် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုဈေးရောင်းတဲ့နေရာတွေမှာလည်း ရှိပါတယ်။
၁၉။ ဘေ့စ်ဘောကွင်းအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး မျဉ်းဆွဲထားတဲ့ပုံစံပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီမျဉ်းက ကစားသမားတွေအတွက် တော်တော်လေးအခက်တွေ့စေမှာ အသေအချာပါပဲ။
၂၀။ Wikipedia ကို လူတိုင်းဝင်ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိတဲ့ကိစ္စက သိပ်တော့မမိုက်ပါဘူး။ အခုဒီပုံအရ တစ်ယောက်ယောက်ဝင်ပြီး လက်ဆော့သွားတဲ့ပုံပါပဲ။
၂၁။ ဖယောင်းရုပ်တုပြတိုက်မှာထားဖို့ ဆရာသမားတစ်ယောက်ရဲ့ Bruce Wills နဲ့ပုံတူရုပ်ထုပါ။ Vin Diesel ရဲ့ ရုပ်ထုနေရာမှာ Bruce ကို လာထားထားတဲ့ပုံပါပဲ။
Previous ခြိနျးတှခေ့ငျြတဲ့သူတောငျမရှိတဲ့ဘဝကိုရောကျနတေဲ့ ကမ်ဘာ့တငျပါးအကွီးမားဆုံးမိနျးကလေး။
Next လယောဉျပျေါမှာ နရောလုံးဝပွောငျးမထိုငျသငျ့တဲ့ ကွီးမားတဲ့အကွောငျးရငျး။